I-High on Bir, indawo yokuziphekela ene-'whew' - I-Airbnb
I-High on Bir, indawo yokuziphekela ene-'whew'
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Samir
I-High on Bir yigumbi elinombono, lishuthekile, nokho elinokufinyelela okulula. Njengoba uhlala edolobhaneni, uzovuka uzwe umsindo wezinyoni ezitshiyozayo futhi ungaphakathi kwebanga lokuhambahamba leNdawo Yokufikela kanye nezindawo zokudlela eziningi.
Hlala efulethini lokuziphekela eliphelele elinekamelo lokulala, ikhishi-cum-lounge ingxenye, i-en suite bathroom kanye ne-panoramic balcony. Ukufinyelela okuzimele kuqinisekisa ubumfihlo. Idizayinelwe ukunakwa kwemininingwane ecolekileyo, nezilungiselelo zedolobhana ziboniswa ezintweni zangaphakathi ezenziwe ngezandla.
• Isikhala sasendlini esinwetshiwe esingu-33sq mt (~350 sq ft), kanye nevulandi ebanzi
• Umbhede ophindwe kabili ne-settee, ulala kufika ku-3 pax
• Ifakwe indawo yokuhlala eyanele nezihlalo: amakhabethe, isihlalo sefasitela esithokomele, isiqhingi sasekhishini, ifenisha yegumbi lokuphumula nezihlalo zangaphandle
• Ilineni elihlanzekile lombhede kanye nezinto zokugeza zokugeza
• Igumbi lokugezela elinokubuka ngaphandle
• I-solar geyser yamanzi ashisayo aqhubekayo (ene-backup kagesi)
• Izinto ezibalulekile zokupheka ... amabhodwe, amapani, izitsha zetafula, isitofu sokungeniswa, ibhodwe lekhofi, igedlela, njll.
• Kugcwele itiye, ikhofi (yebo, ikhofi lokuhlunga langempela laseNingizimu Indian!), okusanhlamvu ... okuyisisekelo ukuze uqale usuku lwakho
• Ukufinyelela efrijini nesihlungi samanzi
• Ngokubhekela amasimu aluhlaza, izingadi zetiye nensimu yezithelo yama-apula ezayo
• Indawo yokupaka
• Wifi?… kodwa kunjalo!
Njengoba abakwa-Dhauladhar benza indawo yangemuva, indawo yokuhlala izungezwe amasimu aluhlaza futhi inikeza ukubukwa okuhle kakhulu kokushona kwelanga. Phakathi nenkathi yonyaka, ama-paraglider antanta phezulu njengephupho. Indawo Yokufikela - okuyindawo edonsayo enkulu yaseBir - kanye nezindawo zokudlela eziningi zokudlela ezitholakala endaweni yokuhamba kalula okungama-400m. I-Deer Park iyimizuzu eyi-10 nje yokuhamba.
Ngiseduze ... uma ngisedolobheni, ngitholakala kwamakhelwane; futhi njalo, ucingo nje lusuka.